नयाँ कम्पनी हो भन्दैमा बीमीतको आँखामा छारो हाल्ने पोलिसी बनाएका छैनौ– एसके तमोट – Insurance Khabar
नयाँ कम्पनी हो भन्दैमा बीमीतको आँखामा छारो हाल्ने पोलिसी बनाएका छैनौ– एसके तमोट
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७५, आईतवार २१:०४
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका जनरल म्यानेजर एसके तमोट विगत लामोसमय देखी ईन्स्योरेन्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहनु भएको छ । उनले जीवन र निर्जीवन बीमामा काम गरेको अनुभव बटुली सकेका छन् । नेशनल इन्स्योरेन्सबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका तमोटले हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, युनाईटेड इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स हुँदै अहिले जनरल इन्स्योरेन्समा कार्यरत छन् । तीन महिना अघि जनरल इन्स्योरेन्समा नियुक्त भएका तमोटले कम्पनीकोे शाखा विस्तारलाई जोड दिएका छन् । उनले उपत्यका भित्र र बाहिर गरी छ महिना भित्र ४५ वटा शाखा विस्तार गर्न लक्ष्य राखेका छन् । उनै तमोटसँग इन्स्योरेन्स खबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार ः
एसके तमोट- जनरल म्यानेजर, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
नेपालमा पहिले नै १७ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छन् । यसैबिच सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीले बजारमा आफुलाई स्थापित गराउँन कस्तो रणनीति अपनाएको छ ?
हामीले नयाँ कम्पनी भन्ने बित्तिकै नयाँ पोलिसी ल्याएर मात्र राम्रो हुने भन्नै पक्कै पनी हैन । हामीले परम्परागत र पूरानै पोलिसीलाई नै प्रयोग गरीरहेका छौ । पूरानै पोलिसीलाई कम्पनीमा लिएर कसरी बीमीत समक्ष पुग्न सक्छौ भन्ने कुरामा बढी जोड दिईरहेका छौ । कुनै पनी नयाँ कम्पनीहरुले स्थापना भएसँगै पूरानै कम्पनीको पोलिसीहरु नै लिएका हुन्छन् । हामीहरुले पनी त्यही पद्धती नै अपनाईरहेको छौ । बीमीतलाई कसरी बीमामा आकर्षण गर्न भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिईरहेको छौ । हामीहरुले एउटा त बैकास्योरेन्सलाई अगाडी बढाएका छौ भने, अर्को तर्फ हामी जनरल मासमा गएर बीमीतलाई बीमाको बारेमा जनचेतनामूलक जानकारी दिएर आकर्षण गर्न जस्ता रणनिती लिएर हामी अघि बढीरहेका छौ । कम्पनी स्थापना भएको तिन महिना पूरा भईसकेको छ । हामी बजार अनुुसार कम्पनीलार्ई विस्तार गर्दै लाने योजनामा छौ ।
हालको निर्जिवन बीमा व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ? तीनवटा कम्पनीहरु थपिएका छन् यसले निर्जिवन बीमाको क्षेत्रलाई कस्तो असर गर्छ वा फाईदा ।
यसको बजार निकै राम्रो छ । भर्खरै मात्र म पश्चिम नेपालमा गएर आएको छु त्यहाँ पनी मैले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु । अन्य क्षेत्रमा पनी यसको बजार राम्रो नै देखीन्छ । निर्जिवन बीमाको क्षेत्रमा ३ वटा नँया कम्पनीहरु प्रवेश भएका छन् । यसले पक्कै पनी निर्जीवन बीमाको बजार विस्तारको लागि सहयोग गर्दछ । यसमा हामीले अझै नयाँ बजार खोज्छौ । यसले अझै बीमीतमा पुग्न सहज हुने र यसले बीमाको बजारलाई बढाउन सहयोग गर्दछ ।हामीले पूरानो कम्पनीहरुको व्यवसायमा आँच पुग्ने काम चाही पक्कै पनी गर्दैनौ । बजार राम्रो भएको हुनाले यसमा पूराना कम्पनीलाई खासै गदैन ।
हामीले पूरानो कम्पनीहरुको व्यवसायमा आँच पुग्ने काम चाही पक्कै पनी गर्दैनौ । बजार राम्रो भएको हुनाले यसमा पूराना कम्पनीलाई खासै गदैन ।
सेवाग्राहीलाई अरु कम्पनी भन्दा फरक सेवा सुविधा के दिदै हुनुहुन्छ ?
हामीले पूरानै पोलिसीलाई नै प्राथमिकता दिएका छौ । नयाँ कम्पनी भयो भन्दैमा हामीले बीमीतको आँखामा छारो हाल्ने पोलिसी बनाएका छैनौ ।हामीले पूरानै पोलिसीहरु मार्फत कसरी बीमीतलाई आकर्षण गर्न सक्छौ भन्ने विषयमा ध्यान दिईरहेका छौ । त्यसैले अरु कम्पनी भन्दा खासै परीर्वतन भने छैन ।
हामीले पूरानै पोलिसीहरु मार्फत कसरी बीमीतलाई आकर्षण गर्न सक्छौ भन्ने विषयमा ध्यान दिईरहेका छौ । त्यसैले अरु कम्पनी भन्दा खासै परीर्वतन भने छैन ।
जति कम्पनी खोलिए पनि सबै शहर केन्द्रित हुने गरेको आलोचना छ । तपाईहरु गाउँ जानको लागी कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले कम्पनी स्थापना गरेको ३ महिना भईसकेको छ र हामीले बजारमा कम्पनी विस्तार गर्दौ अघि बढ्दै छौ । बिशेष गरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सहरका लागि नै उपयुक्त हुन्छन् । हामी बुटबल, बनेपा, नारायणघाटमा चाडौ नै कृषि बीमा गराउने क्रममा छौ । तर, कृषिको आधारमा हेर्न हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो हुने देखीन्छ । हाल हामी कृषिको क्षेत्रमा पनी विस्तारै अघि बढ्ने सोचमा रहेका छौ शाखा विस्तारमा हामी उपत्यका बाहिर पनी जाने प्रयासमा छौ । यो छ महिना भित्रको अवधीको समयसम्म ४५ वटा शाखा विस्तार गर्न हामीले लक्ष्य राखेका छौ । त्यस पश्चात हामी पनी ग्रामीण क्षेत्रसग नजिक भएर काम गर्न छौ ।
तपाई लामो समय देखी बिमा क्षेत्रमा हुनुुहुन्छ । बिमा कम्पनीहरुले अझै पनि समयमा दाबी भुक्तानी गर्दैनन् भन्ने गुनासो छ । तथ्याकले पनि त्यहि देखाउँछ ? यसको कारण के होला ?
मैले बीमा क्षेत्रमा निकै समय बिताईसकेको छु । म नेशनल इन्स्योरेन्स, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स, सिदार्थ इन्स्योरेन्स, युनाईटेड इन्स्योरेन्स र रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्समा आवद्ध भईसकेको छु । यो समस्या त पहिलादेखी नै हो । हालको समस्या मात्र हैन । पूरानो दाबी भुक्तानी पनी बाँकी रहेको छ । त्यसैले पनी बढी देखीएको हो की भन्ने हो । तर पनि दाबी भुक्तानी भएको कागजात कम्पनीमा बुझाउनु पर्यो । आवश्यक कागजातको पेश पछी कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिई हाल्छ ।
तपाईको बिचारमा अब आउँने विद्येयक कस्तो हुनुपर्छ ?
बीमीतलाई फाईदा हुने कुरा बीमा विधेयकमा ल्याउनु परेको छ । बीमीतलाई पहिला दोस्रो कम्पनीलाई र राज्यलाई फाईदा हुने विधेयक ल्याउनु पर्छ र ठूला –ठूला किसीमको घाटा भयो भने सरकारले पनी अनुदान दिनुपर्छ । कम्पनीले भुक्तानी गर्छ नपुगेको अवस्थामा सरकारले पनी सहयोग गनुपर्छ । यसमा बीमा पहँुचको विषयमा पनी विधेयकमा राख्दा राम्रो हुन्छ । बीमा बजारलाई कुन रुपबाट अघि बढाउन सकिन्छ र तालिमहरु आयोजना गर्दा स्थानियलाई कसरी लक्षित गर्न सकिन्छ, तालिमलाई कसरी फलदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनी विधेयकमा राख्दा राम्रो हुन्छ । मोटर बिमामा नक्कली पोलिसी नै जारी भएको देखियो । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? तेस्रो पक्ष बीमामा चाहि आएको छ भन्ने सुनेको थिए । हामी आफै नै त्यही नै कम्प्युटर लगेर रसीद दिने व्यवस्था गरीरहेका छौ । यस कुरामा बीमीत पनी आफै सचेत हुुनुपर्छ । मोटर बीमा गर्न बीमकले गरेको नक्कली रसीद तिरेको बिल लिनबाट आफै बच्नु पर्ने बताएका छन् ।
नेपालमा बीमाको दायरा बढाउँन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
बीमा समिती मार्फत सेमिनार, गोष्ठि, स्थानिय तहमा गएर भेला गर्नुका साथै जनचेतनामूलक तालिम दिने व्यवस्था गनुपर्दछ । उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको स्थानको बारेमा पूर्व जानकारी एवं स्थानियलाई कसरी बढी मात्रामा पँहुच पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । बिद्यालय तहदेखी नै बीमालाई कोर्समा समावेश गरीदा बीमा क्षेत्रको ज्ञानमा वृद्धि हुने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखीन्छ ।
बीमाको पहुँच निकै न्यून मात्रामा भएको हुँदा यसका साथै बीमा विस्तारका लागि बीमा समितीले वा कम्पनीको सँयुक्त प्रयास गरेर बीमा पँहुचका लागि प्रचार प्रसारका लागि काम गर्नुपर्छ । कम्पनीको तर्फ बिमा चेतना बढाउँन तपाईहरुले के गर्ने योजना बनाउँनु भएको छ ? हालको दिनमा हामीले खासै योजना बनाएका छैनौ । तर हाम्रो भावी योजनामा भने विमाको पँहुच बढाउनु नै रहेको छ । यसमा हामीले विभिन्न संचार माध्यमको प्रयोगको प्रयोगबाट र मासमा गएर जनचेतना बढाउने हाम्रो भावी योजना रहेको छ । साथै कम्पनी भित्रका कर्मचारीहरुलाई पनी हामीले बीमा तालिम दिईरहेका छौ ।
कम्पनीको आगामी योजना के छ ?
कम्पनीको आगामी योजनामा हामीले बीमा साक्षरता बढाउने यसका साथै सातै प्रदेशमा कम्पनीको शाखा विस्तार गरेर कम्पनीको व्यवसाय बढाउन र कृषि क्षेत्रमा पनी हामी अघि बढ्ने तयारीमा रहेका छौ । नेपालको आधा भन्दा बढी जनशक्ति कृषिमा निर्भर रहेको छ । यसमा पक्कै पनी बजार राम्रो भएको हुँदा यसलाई पनी विस्तृत रुपमा अघि बढाउने कम्पनीको योजना रहेको छ ।
तपाईको विचारमा बीमा किन गर्ने ?
सारा नेपालीहरु आफनो सम्पतीको सुरक्षा गर्न बीमा आवश्यक छ र यो सबैले गनुपर्छ । भविष्यमा आउने अनिश्चितता जोखीमलाई निश्चित गर्नु नै बीमा हो । बीमा फाईदा हैन भोलीको दिनमा हुने जोखम न्यूनीकरणको एक पाटो हो भनेर बुझनु जरुरी रहेको छ ।
प्रभु लाइफको खुद बीमा शुल्क आर्जन दोब्बरले बढ्यो, बीमा कोषमा १ अर्ब ७६ करोड
बीमा कम्पनीहरुले पाए समितिबाट पास
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ६४ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य सूचक उत्साहजनक
एक दशक अगाडी यस्तो थियो जीवन बीमा कम्पनीको बोनसदर, कुन कम्पनीको कति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ प्रतिशत मात्रै शाखा खोल्न पाउने, केन्द्रिय कार्यालयमा २० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै
नेपाल लाइफ २० वर्ष पुरा गरि २१ औ वर्षमा प्रवेश, एक खर्ब एक अर्बको सर्वाधिक जीवन बीमा कोष बनाउन सफल
बिश्वब्यापी संकटको समयमा जीवन बीमा गर्नु पर्ने छ कारण
यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको सिइओमा उपासना पौडेल, बीमा क्षेत्रको पहिलो महिला सिइओ
जीवन बीमा कम्पनीलाई साधारणसभा गर्ने बाटो खुल्यो, अटेर गर्ने कम्पनीलाई समितिले स्पष्टिकरण माग्दै
ज्योति लाइफ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सलाई दाँजेर हेर्दा, कुन कम्पनी छ अघि ?
एक तिहाइ कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न बीमा समितिको ७ बुँदे निर्देशन
ठुला र संस्थागत लगानीकर्ताले बीमाको शेयर उठाउदै, साना लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’
स्वाभिमान लघुवित्तको बोनश शेयर सुचिकृत
एशियन लाइफको भुक्तानी अब सिधै बीमितको बैंक खातामा, गर्यो एनसीएचएलसँग सम्झौता
शेयर बजार दोहोरो अंकले घट्दा ८ कम्पनीको शेयरमा लाग्यो सकारात्मक सर्किट
नेप्से १२ अंकले घट्दा साढे ६ अर्बमाथिको कारोबार
मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको आईपिओ आइएमई पेबाट भर्न मिल्ने
काठमाडौं उपत्यकाका एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको कुन शाखाहरु कहिले खुल्छ ?